လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက်ကြည့်နည်း – Pwintsan
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက်နည်း
လူတစ်ဦးစီမှာ ပင်ကိုယ် `ဗီဇ´ လေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ ပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့၊ကြိုသိထား။ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးရင် ခေါက်ရိုးကျိုးသွားပြီ။
(၀) လောဘကြီးသူ (အလိုဆန္ဒ ပြင်းပြသူ၊ အကျိုးရှိအောင်လုပ်)
(၁) ဒေါသကြီးသူ (လူတကာကို လိုက်ဆဲတတ်သူ ၊ ပြတ်သားသူ)
(၂) မောဟစိတ်လွန်ကဲသူ (ထိုင်းမှိုင်းသူ၊ ရန်မလိုသူ)
(၃) မေတ္တာစိတ်ရှိသူ (ခင်တတ်မင်တတ်သူ)
(၄) ဂရုဏာစိတ်များသူ (သနားငဲ့ကွက်တတ်သူ)
(၅) မုဒိတာ စိတ်များသူ(အကုန်သူ ကြီးပွားတာ ဝမ်းမြောက်တတ်သူ)
(၆) ဥပေက္ခာသမား ( ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဟု သဘောထားသူ၊ လှည့်မကြည့်ဘဲ ထားတတ်သူ)ဆိုပြီး (၇)မျိုး ခွဲခြာထားပါတယ် …….။
တွက်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် ကိုယ်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ရယ် ၊မွေးနံကို ဂဏန်းပြောင်းပြီး ပေါင်းပါ။ရတဲ့ အဖြေ (၇) နဲ့ စားရပါမယ် ထွက်လာတဲ့ အဖြေကတော့ ကိုယ့်ရဲပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ့ ။
သင့် မွေးသက္ကရာဇ်က ၁၃၅၃- ခု သောကြာသားဆိုရင် ၆-ပေါ့။ ၁၃၅၃+၆=၁၃၅၉
၁၃၅၉÷၇=၁ ( ကြွင်းတော- ဒေါသကြီးသူပေါ့ )
ကဲ ! အောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်လေးကို ကြည့်ကြတာပေါ့ ….
သူကတော့ လိုချင်စိတ်များတယ် ။ရတာနဲ့ မတင်းတိမ်ဘူး ။ရောင့်၇ဲတဲ့ စိတ်မရှိဘူး ။ရောက်တဲ့ နေရာမှာ မပျော်ဘူး ဒီထက်သာယာတဲ့ဘ၀ကို လိုလားတဲ့ သူ။ တစ်ခုမပြီးခင် နောက်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ် ဘယ်အရာမဆို လက်ဝါးကြီး အုပ်ချင်တယ် ။
ဘယ်တော့မှလည်း နောက်လိုက်မလုပ်ချင်ဘူး ။ ကိုယ်ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်အရာကိုမှ မထောက်ထားဘူး မှားသည်မှန်သည် မခွဲခြားဘူး ဘယ်နည်းနဲ့ မဆို ရအာင်ယူမှ ကျေနပ်တဲ့ သူ။
လိုချင်စိတ်များတော့ ဘာမဆိုလုပ်ရမှာ ၀န်မလေးသူပေါ့။ ချမ်းသာလိုတယ် ကြွယ်ဝလိုတယ် ချမ်းသာချင်ကိုလဲ ရမဲ့ သူ။ ဒါပေမဲ့ မှားလား မှန်လား တရားဝင်လားတရားမ၀င်လားတွေးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခတော့ တွေ့နိုင်တာပေါ့ ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ သူကဘ၀ကို ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ ဖြတ်သန်းမည့်သူပါ။ သူတစ်ပါးမှာရှိတာထက် လိုချင်စိတ်မြင့်မားနေတော့ လူတော်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ လိုချင်တဲ့ စိတ်ကလေးကို စနစ်တကျ အသုံးပြုသွာမယ်ဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ် လူသားဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာ အမှန်ပါ။
အကြွင်း (၁ ) ဒေါသ။
စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံစိတ်များတယ် မတော်မတရား လုပ်တာတွေ့ရင် ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လဲ ၀င်ပါဖို့ ၀င်ပြောဖို့ ၀န်မလေးတဲ့သူ ဘေးကနေ အလိုလို ဒေါသထွက်နေတတ်တယ် ။
စိတ်တိုဒေါသထွက်ရင်လဲ ဘာမဆို လုပ်ပစ်ပြောပစ်လိုက်မှကျေနပ်တဲ့သူပေါ့ ။ စိတ်ကသာကြီးပါတယ် သူ့နှလုံးသားကတော့ ဖြူစင်လွန်းပါတယ် ။
ဘယ်တော့မှလဲ ကိုယ့်ဘက်ကစပြီး ရန်မလုပ်ဘူး သန့်သန့်လေးပြောတတ်ဆိုတတ်တယ် ။ လာစော်ကားပြီး လာငြိပြီ ဆိုရင်တော့ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ် အထိ လိုက်မဲ့သူပဲ ။ ပင်ကိုစိတ်ရင်းကောင်းတယ် ။
သူတစ်ပါးကို ပေးရမှာ ကျွေးရမှာ ထိပ်ဆုံးကပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ စိတ်မြန် ဒေါသ ထွက်လွယ်တာကြောင့် အန္တရာယ် အမြဲ ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ စိတ်မြန်ပုံကတော့ ဖိနပ်စီးရတာ ခက်နေရင်တောင် ဖိနပ်ကိုကန်ထုတ် ရန်လုပ်ပြီး ဖိနပ်မပါပဲ လျှောက်သွာတတ်တဲ့ သူမျိုး။
ကိုယ်ကို လာစော်ကားလာရင်လဲ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်ထဲမှာ တစ်နုံ့နုံ့နဲ့ တွေးပြီး ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဒေါပွနေတတ်တယ် ။
အဲဒီစိတ်ကလေးကို ထိန်းနိုင်တဲ့ နေ့ရောက်ရင် ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့ လမ်းပေါ်ကို စရောက်တဲ့နေ့ပါပဲ ။ ဘယ်သို့ဆိုစေ “လူဖြောင့်စိတ်တို´´ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အလွန်ရိုးဖြောင့်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။
အကြွင်း (၂ )မောဟ။
သိပ်တွေဝေတတ်တယ် ဘယ်အရာမဆို ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင် မချနိုင်ဘူး ။အရာရာကို မေ့လျှော့နေတတ်တယ် ။ တစ်ခါတစ်လေး ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ ငေးမောနေတတ်တာတောင်တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။
သီးသန့်နေလို့စိတ်ပြင်းတယ် ။ပြသနာတစ်ခု တစ်ယောက်ထဲ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး မြွေမသေ ဒုတ်မကျိုး လုပ်တတ်တယ် ။ အလွန်တော်တဲ့ ဖြန်ဖြေရေးသမာလေး။ ကြားဝင်ဖြေရှင်း ရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်နှခွ မြင်တဲ့သူ။
ပြသနာတွေ့ရင်တောင် ဒါတွေကို မေ့လျှော့ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်နေမဲ့ သူပဲ ။ဒါ့ကြောင်ဘာကိုမှ လေးလေးနက်နက် မရှိဘူးလို့ အထင်ခံရတတ်တယ် ။
စကားသာ ကျလောက်အောင်ပြောတာ တစ်ခါတစ်လေ ရှေ့နောက်မညီ ပြောပြီးတာတွေ မေ့တတ်ပြန်တယ် ။စိတ်ဓာတ်တတ်လွယ် ကျလွယ်တယ် ။ အရာရာ မပြတ်မသား နှောင့်နှေးလွန်းတော့ ဘ၀အခွင့်အရေး တွေ မကြာခဏ လက်တစ်လုံးကြား ဆုံးရှုံးရတတ်တယ် ။
သူ့ဘ၀ကို နိုင်နိုင်နှင်းနှင်း ပဲ့ထိန်းပေတဲ့ သူရှိမှ သူဘ၀က ဟန်ကျမယ် ။ နောက်ကတစ်ချိန်လုံး လိုက်ပြောနေမှ တန်ရုံကျမှာ ။အပြောခံရလို့ စိတ်ဆိုးမှာတော့ မပူနဲ သူကဘယ်တော့မှ မှတ်မထားလို့ပါ ။
သူကတော့ မေတ္တာ ရှင်ကြီးပေါ့ ။အားနာတတ်တယ် ၊ယုံစားလွယ်တယ် ၊သူတစ်ပါးအပေါ် ခွင့်လွတ်နားလည်စိတ်ရှိတယ် ။ သည်းခံစိတ်ရှိတဲံ့နေရမှာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး အောချရလောက်တဲ့  အထိပေါ့။
အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။လူသားအားလုံးအေ ပ်ါလေးလေး စားစား ဆက်ဆံတတ်တယ် ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ နှိမ့်ချနေတတ်တယ် ။
သူအနေနဲ့ ရိုးပေမဲ့ သွားအထင်မသေးပါနဲ့ သူ့မှာချစ်တဲ ခင်တဲသူတွေ အလွန်ပေါတဲသူပါ ။လမ်းလေဂျပိုး လူမိုက်ကအစ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး အထိ သူ့ကိုခင်ကြတယ် ။အရေးအကြောင်းဆို ကူညီဖို့အသင့်ပဲ ။မြင့်မြတ်တဲံ့ စိတ်သဘောထား အပေါ် လူတိုင်းက နေရာပေး ဆက်ဆံကြတယ် ။
ရန်သူအပေါ်မှာတောင်မေတ္တာထား တော့ ဘေးလူတွေနာမလည် အားမလိုအား မရ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ရန်သူကိုမေတ္တာနဲ့  အဆုံးမှာ စည်းရုံးနိုင်တဲ့ သူပါ ။စိတ်သဘောထား ကြီးတယ် မဟုတ်တာ မလုပ်တဲ့သူ။
ဘယ်သူ့ကိုမဆို တန်ဖို့းထားဆက်ဆံတတ်တယ်။အပြောသမားမဟုတ်ဘူး လက်တွေ့ဆန်တယ် ။အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့သူ။ အချစ်မေတ္တာ အပေါ် အလေးအနက်ထားတယ် ။
အခက်အခဲ ကိုရင်ဆိုင်ရရင်တောင် မေတ္တာ ရှေ့ထားပြီး အောင်မြင်မှုကို ရယူတဲ့သူ ပါ ။ အားလုံးသိပါတယ် အောင်ခြင်(8)ပါးကို မြတ်စွာဘုရားက မေတ္တာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တာကိုလေ။
ရင်တဲမှာစာနာတတ်တယ် ၊ ခံစားတတ်တယ်၊ ကြင်နာတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိနေတယ် ။ သိပ်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ်။ ချစ်သူခင်သူဖြစ်စေ သတ္တ၀ါတွေကိုဖြစ်စေ “သနားပါတယ်နော်´´ ဆိုပြီး စာနာစိတ်နဲ့ အမြဲ ကူညီလို့စိတ်ရှိတယ် ။
သနားအောင်ပြောရင် ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးနေပါစေ ခွင့်လွှတ်တယ် ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန်သူကိုတောင် သနားတတ်တဲသူ ။စိတ်ဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရန်သူကို သူ့ခမျာ ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံး ရန်လိုနေတာ သနားပါတယ်တဲ့လေ။
ဒါပေမဲ သူကသူတစ်ပါးအပေါ် ဂရုနာထားသလိုသူ့အပေါ်မှာ ဂရုစိုက်မှ ကျေနပ်တတ်တဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုက်ဘူး အလေးမထာဘူး အချစ်ပေါ့တယ်လို့ ထင်ရင် စိတ်ကောက်ပြီး ၀ုန်းတိုင်းကျဲ အရွဲ့တိုက်တတ်သူ။
၀မ်းနည်းလွယ်တယ် တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ် ။ ငါကောင်းသလောက်ငါ့အပေါ်မကောင်းဘူးလို့ စိတ်ဝင် ၀မ်းနည်းသွာပြီဆိုရင် အမြန်လေးသာ ချော့လိုက်ပါ ။လူပုံစံ စတိုင်၊ ဟန်ပန်က အစ ပြုမူပြောဆိုပုံက မာကျစ်ကျစ် ၊ဘုခွပြော၊ မသနားတတ်တဲ့ ကြင်နာစိတ်မရှိတဲ့
သူလိုအပြင်ပန်းမှာ ပေါ်နေတယ် ။ တကယ်အတွင်းစိတ် ရင်ထဲမှာတော့ ဂရုဏာ အပြည့်ရှိတဲသူပါ ဂရုဏာကြီးတဲ့ ဟန်ဆောင်နေတဲ့ သူနဲတော့ တခြာစီပေါ့ ။
သူ့သဘော သူ့သဘာဝ သူ့မနောကိုသိတဲ့ သူတွေကတော့ လေးလေးစားစား နဲ့ သူ့အရိပ်ကို ခိုဝင်ကြတယ် ။ ဦးဆောင်သူ ၊ဆရာတွေ ၊ သမားတော်တွေ တော်တော်များများကတော့ ကရုဏာရှင်တွေပေါ့ ။
မုဒိတာကို လက်ကိုင်ထားနိုင်သူမျိုးကတော့ ရှားပါးလှပါတယ် ။သူကတော့ ရှားရှားပါးပါးထဲက သူတစ်ယောက်မို့ လူတစ်သောင်းမှာ တစ်ယောက်တွေ့ခဲလှတဲ့ မုဒိတာ ပွားနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့ ။
သူတစ်ပါးအောင်မြင်တာ ၊ချမ်းသာကြွယ်ဝတာ ၊ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တာ၊နာမည်ကြီးတာ ၊ငွေရတာ ၊အလုပ်တိုးတတ်တာ တွေ့ရင် ကိုယ်ကပဲ ဒါတွေကို ခံစားနေရသလိုလိုနဲ့ ပိတိဖြာပြီး ဘေးကနေကြည်နူးနေတတ်တဲ့ သူမျိုး ဒီကမ္ဘာမှား ရှားပါတဲသူပေါ့။
မနာလို ၀န်တိုစိတ်မရှိဘူးအတင်းအဖျင်းမပြောတတ်ဘူး ၊မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ် ။အရာရာ ရင်ထဲ ခံစားပြီးမှ လုပ်တတ်ပြောတတ်တဲ့သူ ။မှန်ကန် မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုထိတ်တန်းရောက်တယ်။
ကိုယ်က သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာ ၊သူတစ်ပါးကို ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ပြီး ဒုက္ခပေးတာမျိုးလုံးဝမုန်းတီးတယ် ။ ကိုယ်ကလဲ မလုပ်ဘူး၊လုပ်ရပ်တွေကိုလဲ လက်မခံဘူး ။ရှောင်ရှားတယ် ။
.သူတစ်ပါးအားနည်ချက်အားသာချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ချီကျူးပြီးကောင်းတဲ့ အပြုသဘောတွေကို အကြံပေးမှုလေးတွေကြောင့် သူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေပေါတယ် ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်မရှိပဲ သူတစ်ပါးအပေါ် မျှဝေခံစား တတ်လို့ ကြီပွားအောင်မြင်မှာ မလွဲပါဘူး ။
အရာရာ အပေါ်မှာ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နဲ့ ဖြစ်ထွန်းစေသလို ကိုယ်တိုင်လဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မှန်ှမှန်နဲ့အမြဲကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့  နှလုံးသား ပိုင်ရှင်တစ်ဦးပါ ။
အကြွင်း( ၆ )ဥပေက္ခာ။
အလွန်ထူးခြားတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပေါ့။ ဘာသိဘာသာ အေးအေးဆေဆေးပဲ နေတတ်တယ် ။ သူုတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်အောင် အမြဲကြိုးစာနေတတ်တယ်။ ၀င်ပြီး စွတ်ဖက်တဲ့ သဘာဝ ကင်းတယ် ။
ရန်သူကိုတောင် ဒေါသထွက်ပြီး ရင်မဆိုင်ပဲ မသိသလို့ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ်တာ မဟုတ်သလို့ ခပ်မဆိတ်နေတတ်တယ်။ ဥပေက္ခာပြု ကျောခိုင်းနေတတ်တယ် တည်ကြည်တည်ငြိမ်ပြီး လူးသားအာလုံးကို ကိုယ်စိတ်ကမှန်တယ်ထင်တာလုပ်နေကြတာပဲတဲ့ ။
ဘာဝင်စွတ်ဖက်စရာလို့လဲဆိုတဲ့ သဘော ထားတတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ၀န်းကျင်အလုပ်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တတ်လို့ အောင်မြင်ကြီးပွားကြပါတယ် ။ ထူးခြားချက်က အနေအေးပြီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထင်နဲ့ ။
အရာရာကို သိတယ် လေ့လာတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲ လေ့လာနေတယ် ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းဆက်တွေအပေါ် နားလည်လွန်းလို့ အရာရာကို အပြစ်မမြင်ပဲ နေတတ်တဲ့သူ ။
အခက်အခဲတွေ ၊ ဒုက္ခတွေကို သူ့ဆီမှာ အကူညီတောင်း ကြည့်။ ကိုယ့်ပြသနာ တစ်ခုကို သူ့ပြသနာတစ်ခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောထာပြီး ကူညီမှာသေချာတယ် ။ကိုယ်နဲ့ မပတ်သက်သမျှ ၀င်မပါဘူး။
လူတဈယောကျ၏ ပငျကိုယျ စရိုကျတှကျနညျး။
လူတဈဦးစီမှာ ပငျကိုယျ `ဗီဇ´ လေးတှေ ပါလာတတျပါတယျ။ ပွငျဖို့မကွိုးစားနဲ့၊ကွိုသိထား။ဆယျ့ရှဈနှဈပွညျ့ပွီးရငျ ခေါကျရိုးကြိုးသှားပွီ။
(၀) လောဘကွီးသူ (အလိုဆန်ဒ ပွငျးပွသူ၊ အကြိုးရှိအောငျလုပျ)
(၁) ဒေါသကွီးသူ (လူတကာကို လိုကျဆဲတတျသူ ၊ ပွတျသားသူ)
(၂) မောဟစိတျလှနျကဲသူ (ထိုငျးမှိုငျးသူ၊ ရနျမလိုသူ)
(၃) မတ်ေတာစိတျရှိသူ (ခငျတတျမငျတတျသူ)
(၄) ဂရုဏာစိတျမြားသူ (သနားငဲ့ကှကျတတျသူ)
(၅) မုဒိတာ စိတျမြားသူ(အကုနျသူ ကွီးပှားတာ ဝမျးမွောကျတတျသူ)
(၆) ဥပက်ေခာသမား ( ကိုယျဖွဈကိုယျခံဟု သဘောထားသူ၊ လှညျ့မကွညျ့ဘဲ ထားတတျသူ)ဆိုပွီး (၇)မြိုး ခှဲခွာထားပါတယျ …….။
တှကျနညျးကတော့ လှယျပါတယျ ကျိုယျရဲ့ မှေးသက်ကရာဇျရယျ ၊မှေးနံကို ဂဏနျးပွောငျးပွီး ပေါငျးပါ။ရတဲ့ အဖွေ (၇) နဲ့ စားရပါမယျ ထှကျလာတဲ့ အဖွကေတော့ ကိုယျ့ရဲပငျကိုယျစရိုကျပေါ့ ။
သငျ့ မှေးသက်ကရာဇျက ၁၃၅၃- ခု သောကွာသားဆိုရငျ ၆-ပေါ့။ ၁၃၅၃+၆=၁၃၅၉
၁၃၅၉÷၇=၁ ( ကွှငျးတော- ဒေါသကွီးသူပေါ့ )
ကဲ ! အောကျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ စရိုကျလေးကို ကွညျ့ကွတာပေါ့ ….
အကွှငျး (0) လောဘ။
သူကတော့ လိုခငျြစိတျမြားတယျ ။ရတာနဲ့ မတငျးတိမျဘူး ။ရောငျ့ရဲတဲ့ စိတျမရှိဘူး ။ရောကျတဲ့ နရောမှာ မပြျောဘူး ဒီထကျသာယာတဲ့ဘဝကို လိုလားတဲ့ သူ။ တဈခုမပွီးခငျ နောကျတဈခုလုပျခငျြတယျ ဘယျအရာမဆို လကျဝါးကွီး အုပျခငျြတယျ ။
ဘယျတော့မှလညျး နောကျလိုကျမလုပျခငျြဘူး ။ ကိုယျရယူပိုငျဆိုငျဖို့ဆိုရငျ ဘယျအရာကိုမှ မထောကျထားဘူး မှားသညျမှနျသညျ မခှဲခွားဘူး ဘယျနညျးနဲ့ မဆို ရအာငျယူမှ ကနြေပျတဲ့ သူ။
လိုခငျြစိတျမြားတော့ ဘာမဆိုလုပျရမှာ ၀နျမလေးသူပေါ့။ ခမျြးသာလိုတယျ ကွှယျဝလိုတယျ ခမျြးသာခငျြကိုလဲ ရမဲ့ သူ။ ဒါပမေဲ့ မှားလား မှနျလား တရားဝငျလားတရားမဝငျလားတှေးမှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ ဒုက်ခတော့ တှနေို့ငျတာပေါ့ ။
ဘယျလိုပဲ ဖွဈပါစေ သူကဘဝကို ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးနဲ့ ဖွတျသနျးမညျ့သူပါ။ သူတဈပါးမှာရှိတာထကျ လိုခငျြစိတျမွငျ့မားနတေော့ လူတျောတှေ ဖွဈတတျပါတယျ ။
လိုခငျြတဲ့ စိတျကလေးကို စနဈတကြ အသုံးပွုသှာမယျဆိုရငျ ဒိတျဒိတျ လူသားဘဝကို ပိုငျဆိုငျရမှာ အမှနျပါ။
အကွှငျး (၁ ) ဒေါသ။
စိတျကွီးတယျ မဟုတျမခံစိတျမြားတယျ မတျောမတရား လုပျတာတှရေ့ငျ ကိုယျ့ကိစ်စမဟုတျလဲ ၀ငျပါဖို့ ၀ငျပွောဖို့ ၀နျမလေးတဲ့သူ ဘေးကနေ အလိုလို ဒေါသထှကျနတေတျတယျ ။
စိတျတိုဒေါသထှကျရငျလဲ ဘာမဆို လုပျပဈပွောပဈလိုကျမှကနြေပျတဲ့သူပေါ့ ။ စိတျကသာကွီးပါတယျ သူ့နှလုံးသားကတော့ ဖွူစငျလှနျးပါတယျ ။
ဘယျတော့မှလဲ ကိုယျ့ဘကျကစပွီး ရနျမလုပျဘူး သနျ့သနျ့လေးပွောတတျဆိုတတျတယျ ။ လာစျောကားပွီး လာငွိပွီ ဆိုရငျတော့ စိနျချေါရငျ တိမျပျေါ အထိ လိုကျမဲ့သူပဲ ။ ပငျကိုစိတျရငျးကောငျးတယျ ။
သူတဈပါးကို ပေးရမှာ ကြှေးရမှာ ထိပျဆုံးကပေါ့ ။ဒါပမေဲ့ စိတျမွနျ ဒေါသ ထှကျလှယျတာကွောငျ့ အန်တရာယျ အမွဲ ရငျဆိုငျရတတျတယျ။ စိတျမွနျပုံကတော့ ဖိနပျစီးရတာ ခကျနရေငျတောငျ ဖိနပျကိုကနျထုတျ ရနျလုပျပွီး ဖိနပျမပါပဲ လြှောကျသှာတတျတဲ့ သူမြိုး။
ကိုယျကို လာစျောကားလာရငျလဲ ဘယျတော့မှ ခှငျ့မလှတျဘူး။ ဖွဈခဲ့တာကို စဉျးစားပွီး စိတျထဲမှာ တဈနုံ့နုံ့နဲ့ တှေးပွီး ကွိတျမနိုငျခဲမရ ဒေါပှနတေတျတယျ ။
အဲဒီစိတျကလေးကို ထိနျးနိုငျတဲ့ နရေ့ောကျရငျ ခမျြးသာကွီးပှားတဲ့ လမျးပျေါကို စရောကျတဲ့နပေ့ါပဲ ။ ဘယျသို့ဆိုစေ “လူဖွောငျ့စိတျတို´´ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး အလှနျရိုးဖွောငျ့တဲ့ သူတဈယောကျပါ ။
အကွှငျး (၂ )မောဟ။
သိပျတှဝေတေတျတယျ ဘယျအရာမဆို ဆုံးဖွတျခကျြကို ပိုငျပိုငျနိုငျ မခနြိုငျဘူး ။အရာရာကို မလြေှ့ော့နတေတျတယျ ။ တဈခါတဈလေး ငေါငျတောငျတောငျနဲ့ ငေးမောနတေတျတာတောငျတှရေ့တတျပါတယျ ။
သီးသနျ့နလေို့စိတျပွငျးတယျ ။ပွသနာတဈခု တဈယောကျထဲ မဖွရှေငျးနိုငျဘူး မွှမေသေ ဒုတျမကြိုး လုပျတတျတယျ ။ အလှနျတျောတဲ့ ဖွနျဖွရေေးသမာလေး။
ကွားဝငျဖွရှေငျး ရမယျဆိုရငျ နှဈဖကျနှခှ မွငျတဲ့သူ။ အပွောအေးအေးလေးနဲ့ ကလြောကျအောငျ ပွောတတျတဲ့သူ။ သူ့ရဲ့ ရိုးပုံအေးပုံကွောငျ့ လူတိုငျးက ခငျကွတယျ ။ သူကတော့ ရောကျတဲ့နရေမှာ ပြျောအောငျနမေယျ ။
ပွသနာတှရေ့ငျတောငျ ဒါတှကေို မလြေှ့ော့ပွီး ကိုယျလုပျခငျြတာ လုပျနမေဲ့ သူပဲ ။ဒါ့ကွောငျဘာကိုမှ လေးလေးနကျနကျ မရှိဘူးလို့ အထငျခံရတတျတယျ ။
စကားသာ ကလြောကျအောငျပွောတာ တဈခါတဈလေ ရှနေ့ောကျမညီ ပွောပွီးတာတှေ မတေ့တျပွနျတယျ ။စိတျဓာတျတတျလှယျ ကလြှယျတယျ ။
အရာရာ မပွတျမသား နှောငျ့နှေးလှနျးတော့ ဘဝအခှငျ့အရေး တှေ မကွာခဏ လကျတဈလုံးကွား ဆုံးရှုံးရတတျတယျ ။ သူ့ဘဝကို နိုငျနိုငျနှငျးနှငျး ပဲ့ထိနျးပတေဲ့ သူရှိမှ သူဘဝက ဟနျကမြယျ ။
နောကျကတဈခြိနျလုံး လိုကျပွောနမှေ တနျရုံကမြှာ ။အပွောခံရလို့ စိတျဆိုးမှာတော့ မပူနဲ သူကဘယျတော့မှ မှတျမထားလို့ပါ ။
သူကတော့ မတ်ေတာ ရှငျကွီးပေါ့ ။အားနာတတျတယျ ၊ယုံစားလှယျတယျ ၊သူတဈပါးအပျေါ ခှငျ့လှတျနားလညျစိတျရှိတယျ ။ သညျးခံစိတျရှိတဲံ့နရေမှာ နှဈယောကျမရှိဘူး အောခရြလောကျတဲ့အထိပေါ့။
အရာရာကို ရငျဆိုငျရဲတယျ။လူသားအားလုံးအေ ပျါလေးလေး စားစား ဆကျဆံတတျတယျ ။ကိုယျ့ကိုယျကို အမွဲ နှိမျ့ခနြတေတျတယျ ။
သူအနနေဲ့ ရိုးပမေဲ့ သှားအထငျမသေးပါနဲ့ သူ့မှာခဈြတဲ ခငျတဲသူတှေ အလှနျပေါတဲသူပါ ။လမျးလဂေပြိုး လူမိုကျကအစ လုပျငနျးရှငျကွီး အထိ သူ့ကိုခငျကွတယျ ။အရေးအကွောငျးဆို ကူညီဖို့အသငျ့ပဲ ။မွငျ့မွတျတဲံ့ စိတျသဘောထား အပျေါ လူတိုငျးက နရောပေး ဆကျဆံကွတယျ ။
ရနျသူအပျေါမှာတောငျမတ်ေတာထား တော့ ဘေးလူတှနောမလညျ အားမလိုအား မရ ဖွဈတတျကွတယျ။ဒါပမေဲ့ ရနျသူကိုမတ်ေတာနဲ့အဆုံးမှာ စညျးရုံးနိုငျတဲ့ သူပါ ။
စိတျသဘောထား ကွီးတယျ မဟုတျတာ မလုပျတဲ့သူ။ ဘယျသူ့ကိုမဆို တနျဖို့းထားဆကျဆံတတျတယျ။အပွောသမားမဟုတျဘူး လကျတှဆေ့နျတယျ ။အေးအေးခမျြးခမျြးနခေငျြတဲ့သူ။
အခဈြမတ်ေတာ အပျေါ အလေးအနကျထားတယျ ။ အခကျအခဲ ကိုရငျဆိုငျရရငျတောငျ မတ်ေတာ ရှထေ့ားပွီး အောငျမွငျမှုကို ရယူတဲ့သူ ပါ ။ အားလုံးသိပါတယျ အောငျခွငျ(8)ပါးကို မွတျစှာဘုရားက မတ်ေတာနဲ့ အောငျမွငျခဲ့တာကိုလေ။
ရငျတဲမှာစာနာတတျတယျ ၊ ခံစားတတျတယျ၊ ကွငျနာတဲ့စိတျအပွညျ့ရှိနတေယျ ။ သိပျကို ကိုယျခငျြးစာတတျတယျ။ ခဈြသူခငျသူဖွဈစေ သတ်တဝါတှကေိုဖွဈစေ “သနားပါတယျနျော´´ ဆိုပွီး စာနာစိတျနဲ့ အမွဲ ကူညီလို့စိတျရှိတယျ ။
သနားအောငျပွောရငျ ဘယျလောကျစိတျဆိုးနပေါစေ ခှငျ့လှတျတယျ ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရနျသူကိုတောငျ သနားတတျတဲသူ ။စိတျဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရနျသူကို သူ့ခမြာ ငါ့ကိုတဈခြိနျလုံး ရနျလိုနတော သနားပါတယျတဲ့လေ။
ဒါပမေဲ သူကသူတဈပါးအပျေါ ဂရုနာထားသလိုသူ့အပျေါမှာ ဂရုစိုကျမှ ကနြေပျတတျတဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုကျဘူး အလေးမထာဘူး အခဈြပေါ့တယျလို့ ထငျရငျ စိတျကောကျပွီး ၀ုနျးတိုငျးကြဲ အရှဲ့တိုကျတတျသူ။
၀မျးနညျးလှယျတယျ တဈဇှတျထိုးလုပျတတျတယျ ။ ငါကောငျးသလောကျငါ့အပျေါမကောငျးဘူးလို့ စိတျဝငျ ၀မျးနညျးသှာပွီဆိုရငျ အမွနျလေးသာ ခြော့လိုကျပါ ။
လူပုံစံ စတိုငျ၊ ဟနျပနျက အစ ပွုမူပွောဆိုပုံက မာကဈြကဈြ ၊ဘုခှပွော၊ မသနားတတျတဲ့ ကွငျနာစိတျမရှိတဲ့ သူလိုအပွငျပနျးမှာ ပျေါနတေယျ ။
တကယျအတှငျးစိတျ ရငျထဲမှာတော့ ဂရုဏာ အပွညျ့ရှိတဲသူပါ ဂရုဏာကွီးတဲ့ ဟနျဆောငျနတေဲ့ သူနဲတော့ တခွာစီပေါ့ ။သူ့သဘော သူ့သဘာဝ သူ့မနောကိုသိတဲ့ သူတှကေတော့ လေးလေးစားစား နဲ့ သူ့အရိပျကို ခိုဝငျကွတယျ ။
ဦးဆောငျသူ ၊ဆရာတှေ ၊ သမားတျောတှေ တျောတျောမြားမြားကတော့ ကရုဏာရှငျတှပေေါ့ ။
မုဒိတာကို လကျကိုငျထားနိုငျသူမြိုးကတော့ ရှားပါးလှပါတယျ ။သူကတော့ ရှားရှားပါးပါးထဲက သူတဈယောကျမို့ လူတဈသောငျးမှာ တဈယောကျတှခေဲ့လှတဲ့ မုဒိတာ ပှားနိုငျတဲ့ သူတဈယောကျပေါ့ ။
သူတဈပါးအောငျမွငျတာ ၊ခမျြးသာကွှယျဝတာ ၊ ထှနျးထှနျးပေါကျပေါကျဖွဈတာ၊နာမညျကွီးတာ ၊ငှရေတာ ၊အလုပျတိုးတတျတာ တှရေ့ငျ ကျိုယျကပဲ ဒါတှကေို ခံစားနရေသလိုလိုနဲ့ ပိတိဖွာပွီး ဘေးကနကွေညျနူးနတေတျတဲ့ သူမြိုး ဒီကမ်ဘာမှား ရှားပါတဲသူပေါ့။
မနာလို ၀နျတိုစိတျမရှိဘူးအတငျးအဖငျြးမပွောတတျဘူး ၊မွငျ့မွတျတဲ့ စိတျရှိတယျ ။အရာရာ ရငျထဲ ခံစားပွီးမှ လုပျတတျပွောတတျတဲ့သူ ။မှနျကနျ မွငျ့မွတျတဲ့စိတျကွောငျ့အောငျမွငျမှုထိတျတနျးရောကျတယျ။
ကိုယျက သူတဈပါးကို ဝဖေနျတိုကျခိုကျတာ ၊သူတဈပါးကို ငယျကြိုးငယျနာ ဖျောပွီး ဒုက်ခပေးတာမြိုးလုံးဝမုနျးတီးတယျ ။ ကိုယျကလဲ မလုပျဘူး၊လုပျရပျတှကေိုလဲ လကျမခံဘူး ။ရှောငျရှားတယျ ။
.သူတဈပါးအားနညျခကျြအားသာခကျြကို ဖျောထုတျပွီး ခြီကြူးပွီးကောငျးတဲ့ အပွုသဘောတှကေို အကွံပေးမှုလေးတှကွေောငျ့ သူ့ကိုခဈြခငျသူတှပေေါတယျ ။
မနာလိုဝနျတိုစိတျမရှိပဲ သူတဈပါးအပျေါ မြှဝခေံစား တတျလို့ ကွီပှားအောငျမွငျမှာ မလှဲပါဘူး ။အရာရာ အပျေါမှာ ရငျထဲက လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ နဲ့ ဖွဈထှနျးစသေလို ကိုယျတိုငျလဲ ဖွောငျ့ဖွောငျ့ မှနျှမှနျနဲ့အမွဲကွိုးစားနတေဲ့ မွငျ့မွတျတဲ့နှလုံးသား ပိုငျရှငျတဈဦးပါ ။
အကွှငျး( ၆ )ဥပက်ေခာ။
အလှနျထူးခွားတဲ့ နှလုံးသားပိုငျရှငျပေါ့။ ဘာသိဘာသာ အေးအေးဆဆေေးပဲ နတေတျတယျ ။ သူုတဈပါးကိစ်စတှကေိုလဲ ကျိုယျနဲ့မဆိုငျအောငျ အမွဲကွိုးစာနတေတျတယျ။
၀ငျပွီး စှတျဖကျတဲ့ သဘာဝ ကငျးတယျ ။ရနျသူကိုတောငျ ဒေါသထှကျပွီး ရငျမဆိုငျပဲ မသိသလို့ ကိုယျ့ကို ရနျလုပျတာ မဟုတျသလို့ ခပျမဆိတျနတေတျတယျ။
ဥပက်ေခာပွု ကြောခိုငျးနတေတျတယျ တညျကွညျတညျငွိမျပွီး လူးသားအာလုံးကို ကိုယျစိတျကမှနျတယျထငျတာလုပျနကွေတာပဲတဲ့ ။ ဘာဝငျစှတျဖကျစရာလို့လဲဆိုတဲ့ သဘော ထားတတျတယျ ။
ကိုယျ့ကိစ်စနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ၀နျးကငျြအလုပျကို စူးစူးစိုကျစိုကျ လုပျတတျလို့ အောငျမွငျကွီးပှားကွပါတယျ ။ ထူးခွားခကျြက အနအေေးပွီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထငျနဲ့ ။
အရာရာကို သိတယျ လလေ့ာတယျ ။ ပတျဝနျးကငျြကို အမွဲ လလေ့ာနတေယျ ။ဖွဈပျေါလာတဲ့ အကွောငျးဆကျတှအေပျေါ နားလညျလှနျးလို့ အရာရာကို အပွဈမမွငျပဲ နတေတျတဲ့သူ ။
အခကျအခဲတှေ ၊ ဒုက်ခတှကေို သူ့ဆီမှာ အကူညီတောငျး ကွညျ့။ ကိုယျ့ပွသနာ တဈခုကို သူ့ပွသနာတဈခုလို လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ သဘောထာပွီး ကူညီမှာသခြောတယျ ။
ကိုယျနဲ့ မပတျသကျသမြှ ၀ငျမပါဘူး။ ကိုယျနဲ မိတျဆကျမပေးသမြှ မညျမြှမကျြမှနျးတနျးနပေါစေ ပွုံးပွနှုတျဆကျမှာမဟုတျဘူး ။ ယဉျကြေးတယျ သိမျမှတေ့ယျ ၊
အရကွေုံလာရငျ တကယျအားထားရတယျ ။ အကယျကို အမွငျကွညျလငျတဲ့ သူတှပေေါ့ ။တဈနမှေ့ာသူဟာ ဘာသာ သာသနာအတှကျ တနျဖိုးရှိတဲ့လူတဈယောကျဖွဈနိုငျသူ တှလေို့ ရှေးပညာရှိတှကေ ဆိုပါတယျ ။